Graton मा जीवन मा एक दिन - Graton
Graton मा जीवन मा एक दिन
मार्च २ 24, २०२१
सब भन्दा सामान्य प्रश्न मध्ये एक जुन सबै जागिर खोज्नेहरू नयाँ क्यारियर यात्रा सुरू गर्न तयारी गर्दा हो: त्यहाँ काम गर्न कस्तो देखिन्छ?
आज हामी वास्तवमा यो उच्च ऊर्जा, एक्शन-प्याक गेमि energy र मनोरन्जन वातावरणको अंश बन्न चाहन्छौं भनेर जान्ने अवसर प्रदान गर्दछ जुन Graton Resort & Casino हो! सबै घण्टी र सिट्टीको पछाडि, बोनस, ज्याकपट्स, स्लटहरू, टेबलहरू, भोजन गर्ने ठाउँहरू, र रिसोर्ट प्रस्तावहरू, एक टोली हो जुन एक उत्साहजनक र रमाईलो अतिथि अनुभव सिर्जना गर्न अविश्वसनीय परिश्रम गर्दछ।
त्यो दिमागमा राख्दै, हामी हाम्रो टोलीका तीन सदस्यहरूसँग बस्‍यौं, हाम्रो हाउसकीपिंग टीम, आन्तरिक मर्मत टीम, र काउन्ट टीमको प्रतिनिधित्व गर्दै, उनीहरूलाई ग्र्याटन रिसोर्ट र क्यासिनोको जीवनमा विशिष्ट दिन बाँड्न भन्दै। उनीहरूले के भन्नु पर्ने थियो हेरौं!
लिन्डा, हाउसकीपिंग एटेन्डेंट
“मेरो लागि यो मेरो परिवारजस्तै छ। मेरा सहकर्मीहरू, हाम्रा सुपरिवेक्षकहरू र प्रबन्धकहरू ... ”
लिंडा मूल रूपमा चीनको हो र हाम्रो गृहनगर रोहनेर्ट पार्कमा सरे पछि हाम्रो टीममा सामेल भयो। उनी अहिलेको भूमिकामा होटेल र रिसोर्टको स्थापनादेखि नै छिन्। त्यो भन्दा पहिले, उनले आइसक्रीम सेवा गर्ने स्कूप्समा छोटकरीमा पनि काम गरिन्!
लिंडा एक प्रारम्भिक रिसर हो, धेरै दिन बिहान am देखि am बिहानको बीचमा। प्रत्येक बिहान, उनको पारी उनको विभागको हडलबाट सुरु हुन्छ जहाँ लिन्डालाई कुनै पनि र सबै सम्पत्ती-विस्तृत अपडेटहरूको बारेमा जानकारी दिइन्छ। बिहान धेरै बिस्तारै ढिलो हुन सक्छ हाम्रो धेरै पाहुनाहरू उनीहरूको निद्रामा अ .्गाल्न चाहन्छन्। त्यो हाम्रो दिईएको चेकआउट समयमा दिउँसोको वरिपरि सबै परिवर्तनहरू। हाम्रो हाउसकीपिंग टीमका लागि, चीजहरू द्रुत गतिमा द्रुत गतिमा बन्न सक्दछन् र लिन्डाले उल्लेख गरिन् कि यो धेरै सहयोगी छ कि उनको टोलीले दिनको लागि तोकिएको कोठाको स्पष्ट रूपमा संकेत गर्न सक्षम छ। यो आवश्यक भएको ठाउँमा सहयोग गर्नु महत्वपूर्ण छ त्यसैले टोली सदस्यहरूलाई एक अर्कालाई मद्दत गर्न र एक टोलीको रूपमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
हामीले लिन्डालाई सोध्यौं कि कुन प्रकारका गुणहरूले उनलाई उनको भूमिकाको लागि राम्रो बनाउँदछ। उनले साझेदारी गरिन् कि उनीको लागी, सरसफाइ सहजै हुन्छ किनकि उनी मनपराउँछिन् कि उनी आफ्नो वातावरण स्वच्छ र व्यवस्थित रहन चाहन्छन् र उनीहरु लाई दिनहुँको जीवनमा व्यवस्थित गर्न चाहिन्छ त्यसैले यो प्रकारको उसको व्यक्तित्वसँग मिल्छ। लिन्डाले आफूलाई कडा परिश्रम गर्ने व्यक्तिको रूपमा वर्णन गरिन् जुन उनको कार्यहरू गर्न प्रेरित छ। उनीले यस्तो भूमिका मनपराउँछिन् कि उनको धेरै खाली समयको साथ छोड्नुहुन्न। उनको अहिलेको क्षमतामा उनी महसुस गर्छिन् कि उनको कर्तव्यहरू त्यस्तो गतिमा आएको छ जसले उनलाई खुशी पार्दछ।
लिन्डाले उल्लेख गरिन् कि अतिथीहरू पाउनु ठूलो आनन्दको कुरा हो जुन कोठाहरू सुन्दर छन् र उनीहरूले उनको सेवा र कडा परिश्रमका लागि दयालु शब्दहरू साझेदारी गर्दा यो एक उत्कृष्ट पुरस्कार हो।
मार्क, आन्तरिक मर्मत पोर्टर
“तिनीहरूले हाम्रो ख्याल राख्छन्। तपाईका सुविधाहरूको लागि मेरो पेचेकबाट केहि पनि बाहिर आउँदैन र यसको मतलब यो उत्कृष्ट छ! ”
मार्क जन्म र सान्ता रोजामा हुर्केका थिए। यो आउँदो वर्षको जनवरीमा सात बर्ष हुनेछ कि ऊ हाम्रो ग्र्याटन टीमको सदस्य भएको छ!
ऊ आईएम पोर्टरको रूपमा डे शिफ्टमा काम गर्दछ। ऊ आफ्नो दिनको व्यस्त हुनु अघि स्वस्थ बिहानको खाजा र कफीका साथ आफ्नो दिन सुरु गर्न मनपराउँछ। मार्कको प्राथमिकता सहकर्मीहरूसँग भेट्टाउन केही समय लिनको लागि करीव thirty० मिनेट चाँडै आइपुग्नु हो र उहाँ अफलाईन हुँदा वा साताको अन्तमा के भएको हुन सक्छ भन्ने कथाहरू साझा गर्नुहोस्।
प्रत्येक दिन यसले क्यासिनो सफा राख्ने मुख्य लक्ष्यको साथ कर्तव्यहरूको एक फरक मिश्रण ल्याउँछ। उनी पर्यवेक्षकहरुको सराहना गर्दछन् कि उनले सबै नियमहरु, नियमहरु, कर्तव्यहरु, र अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मा अन्तर्दृष्टि प्रदान गर्न समय लिन्छ ताकि उसलाई उनीबाट के आशा गरिन्छ निश्चित रुपमा जान्छ। कर्तव्यहरू आफैं स्थिर हुन्छन् र कहिलेकाँही हाम्रो सम्पत्तीको लगभग सबै क्षेत्रहरू आवाश्यक पर्ने हुन्छ त ऊ पक्कै पनि आफ्नो पाइलामा जान्छ! एक दिन काम सकिसकेपछि र उसले काम सके पछि घर फर्कन खाली भयो, मार्कले आफ्नो दिमाग खाली गर्न र बेलुकाको आराम लिन मद्दत गर्न साँझको व्यायाममा जान मन पराउछन्।
मार्कले हामीलाई थाहा दिनुहोस् कि उनी आफ्नो स्थानको विभिन्न पक्षहरूको धेरै आनन्द लिन्छन् तर एउटा कारण यो हो कि उसले यसलाई साँच्चिकै माया गर्दछन् जुन ठूलो जैकपट जीतको सबै रमाइलो र उत्साहका साथ वरिपरि हुने मौका हो! पाहुनाहरु आफैंमा रमाईलो भएको देख्नु सन्तोषजनक कुरा हो। उनी पनि टोनीको पिज्जाको लागि वा हर्बिट बर्गरको लागि बर्गरको लागि, वा ब्ल्याकज्याकमा हात हाल्ने प्रयासको लागि बन्द दिनहरूमा रोकिंदा रमाईलो गर्दछन्।
समग्रमा, मार्कले हाइटलाइट गर्न चाहान्थे कि उसले ग्रेटोन टोलीका सदस्य भएर हुने सुविधाहरू र फाइदाहरूको कदर गर्दछ। "यो कम्पनीले हाम्रा आवश्यकताहरूको हेरचाह गर्ने तरिका यो एक सुन्दर चीज हो"। उनले यो पनि साझा गरे कि त्यहाँ बढि कोठामा पदोन्नति हुन्छ यदि तपाईं आफ्नो क्यारियर बढाउन चाहनुहुन्छ भने।
Ambrosio, गणना टीम सुपरवाइजर
"यदि तपाई क्यासिनोलाई तपाईको मानव शरीरको रूपमा सोच्नुहुन्छ भने, हामी यसको मुटुको धडकन हुनेछौं।"
एम्ब्रोजिओ सान्ता रोजामा सर्नु अघि रोडियोमा बस्थे। उहाँ २०१ of को अक्टोबरदेखि हामीसँग हुनुहुन्छ! उहाँ पहिले काउन्ट टीम निरीक्षक हुनुहुन्थ्यो यस अघि काउन्टी टीम सुपरवाइजरमा बढुवा हुनु अघि।
हाम्रो सिट इन्टरव्यूको शुरुमा, एम्ब्रोसियोले हामीलाई भने कि क्यासिनो पहिलो पटक खोल्दा, यो शहरको कुरा हो र यति धेरै रोजगारहरू उपलब्ध छन्, उनले यसलाई केहि नयाँ प्रयास गर्ने उत्तम अवसरको रूपमा देखे। उनी छनौट भएको कल पाउँदा उनी अत्यन्त खुशी थिए।
एम्ब्रोसियो भनेको समूहको हाम्रो रातको उल्लू हो, साधारण २ बिहानको समयको साथ। उनको शिफ्टको क्रममा, एम्ब्र्रोसियो र उनको टीम हाम्रो सबै सम्पत्तीमा रकम को सुरक्षित स्थानान्तरणको लागि जिम्मेवार छन्। जब एम्ब्रसियोको दिनको अन्त्यतिर सबै चीजहरू ढिलो हुन थाल्छ, उसले आफ्नो क्षेत्रहरू अर्को टीमको लागि तयार पारेर पक्का गर्न सुनिश्चित गर्दछ।
गणना टोलीको अंश बन्नको लागि धैर्य र विस्तारमा ध्यान आवश्यक छ। एम्ब्रोसियोले साझेदारी गरेको छ कि यद्यपि यो कहिलेकाँही माग गरिएको हुन सक्छ, उसको ओहदा उसलाई राम्रोसँग सूट गर्दछ किनकि ऊ आफैं एकदम विस्तृत उन्मुख छ र हरेक दिन एक चुनौतीको रुपमा देख्छ जुन ऊ अगाडि बढ्न तयार छ।
एम्ब्र्रोसियोले हामीलाई एक राम्रो स्पष्टीकरणको साथ छोडिदिए किन उसको कामले उनलाई खुशी पार्दछ:
“मलाई मेरो काम मन पर्छ। यसले मलाई धेरै गर्व गर्छ। म यसमा गर्व गर्दछु किनकि हामी क्यासिनोमा केही अति संवेदनशील सामग्रीहरू गणना गर्दै पैसाका साथ हेरिरहेका छौं। तपाईंले राम्रो प्रदर्शन गर्दा सन्तुष्टि महसुस हुन्छ। ”
Graton रिसोर्ट र क्यासिनोमा, हामी कडा मेहनतको साथ गर्व गर्दछौं कि हाम्रो टीमका सबै सदस्यहरूले उत्कृष्ट कार्य वातावरण र अतिथि अनुभव सिर्जना गर्न योगदान पुर्‍याउँछन् जुन हाम्रा पाहुनाहरूलाई फिर्ता आउँछन्। हामी हाम्रो सम्पत्तीको राम्रो प्रतिनिधि सोध्न सक्दैनौं। हाम्रो दिनको लाइफ फिचरमा भाग लिनेको लागि हाम्रा अन्तर्वार्तादाताहरु लाई एक ठूलो धन्यवाद!
Graton Rancheria को संघीय भारतीयहरुलाई धन्यवाद, हाम्रो प्रत्येक एक कर्मचारी को हालसालै ज्याला वृद्धि भयो! टिप पोजिशन्सले अब प्रति घण्टा १ १२२ टी २.50० प्राप्त गर्दछ र गैर-टिप गरिएको प्रति घण्टा स्थितिहरूले प्रति घण्टा १TP2T3.25 को बृद्धि प्राप्त गर्दछ। वेतनभोगी टोली सदस्यहरूलाई न्यूनतम १०१TP११ टी वृद्धि दिइयो।
हाम्रा सबै पाठकहरूका लागि, यदि हामीले तपाईंको रुचिलाई रोक््यौं र तपाईं हामीसँग उपलब्ध हुन सक्ने भूमिकाको बारेमा तपाईंलाई अझ बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो भ्रमण गर्नुहोस्। करियर पृष्ठ र आज लागू!
पढ्न को लागी धन्यवाद र हामी तपाईंलाई चाँडै भेट्न अगाडि हेर्दछौं!
अगस्ट २५, २०२१
तपाइँको सोनोमा काउन्टी छुट्टी को भन्दा बाहिर कसरी बनाउने
यसलाई सामना गरौं, तपाइँ एक छुट्टी को लागी ढिलो गरीरहनुभएको छ। तपाइँ तपाइँको झोला प्याक गरीएको छ र तपाइँ सबै अनुभव गर्न को लागी तयार हुनुहुन्छ […]
थप पढ्नुहोस्… बाट तपाइँको सोनोमा काउन्टी छुट्टी को भन्दा बाहिर कसरी बनाउने
थप पढ्नुहोस्… बाट Graton’s Guide to table games
अक्टोबर २७, २०२१
Graton मा 8 उत्कृष्ट वर्षहरू!
फिर्ता आउनु भएकोमा स्वागत छ! यो लगभग नोभेम्बर हो, हाम्रो वार्षिकोत्सव महिना, र हामी अलिकति उदासीन महसुस गर्दैछौं। ग्राटन रिसोर्टको भ्रमण […]
थप पढ्नुहोस्… बाट Graton मा 8 उत्कृष्ट वर्षहरू!